Fanefitry ny valanaretina :: Ho maimaim-poana ny vaksiny miaro amin’ny Covid-19 • AoRaha
Fanefitry ny valanaretina Ho maimaim-poana ny vaksiny miaro amin’ny Covid-19
Andrasana amin’ny fiandohan’ny volana mey ho avy izao ny vaksiny fanefitry ny Covid-19. Nolazain’ny loharanom-baovao avy ao amin’ny minisiteran’ ny Fahasalamam-bahoaka fa “ho maimaim-poana ny fanaovana an’ity vaksiny ity”. Hisy kosa ny fanaraha-maso hatao amin’ ireo natao vaksiny, aorian’ny fahavitany.
Mipetraka ny lamina rehetra, ka misy ireo olona hatao laharam-pahamehana amin’ny fahazoana azy kanefa tsy antery ny fanaovana ny vaksiny fa an-tsitrapo. Hatreto, tsy mbola nanome ny anaran’ireo vaksiny ny avy ao amin’ity minisitera ity ankoatra ny hoe misy karazany efatra no mety eto amintsika.
“Tsy maintsy napetraka aloha ireo olona mila hatao vaksiny voalohany, ohatra ny mpiasan’ ny fahasalamana sy ny mpitandro ny filaminana tena miatrika ny ady. Tsy ho tonga indray mandeha mantsy ny fangatahana natao. Aorian’ireo dia hiditra amin’ny zokiolona mihoatra ny 60 taona sy ny olona marefo, manana aretina mitaiza, toy ny diabeta, misy tosi-dra, aretin’ny voa, olona matavy ary ireo misohika, izay manana taratasy fanamarinana fa misy ireo aretina ireo”, hoy ihany ny loharanombaovao.
Feno ny fepetra
Nohazavain’itsy loharanombaovao fa tokony ho nanomboka omaly ny fisoratana anarana saingy mbola mandrafitra ny pitsopitsony faramparany toy ny “outil de gestion” hanaovana ny fisoratana anarana mba hahafahana mampifanaraka ny vaksiny eo am-pelatanana sy ny tsy hisian’ ny hoe nisoratra anarana fa tsy voaray. Tsy mihoatra amin’ity herinandro ity io fisoratana anarana io. Efa maro anefa ireo mpiasan’ny fahasalamana nandefa ny anarana tao amin’ny minisiteran’ny Fahasalamambahoaka.
An-kilany, ankoatra ireo vaksiny efatra mety amintsika ireo dia misy ihany koa no eritreretina tsara kanefa tsy mety amin’ny fotodrafitrasa sy ny toetany eto amintsika. Mitaky vata fampangatsiahana latsaky 70°C hatramin’ny 90°C ny fitehirizana azy.
Notsindrian’itsy loharanombaovao itsy fa vaksiny tena izy no ho tonga eto amintsika fa tsy misy ny hosoka tahaka ireo fanafody hafa. “Mivoatra hatrany mantsy ity aretina ity ka sarotra no hampiasa an’izany vaksiny tsy tena izy izany”, hoy izy.
Manomboka hita taratra izany ny vokatry ny ady nataontsika satria ankoatra ny fahatongavan’ireo fitaovana famatrarana ôksizena sy ny vaksiny, dia nahitana fidinany ny isan’ ireo narary tamin’ny antontan’ isa omaly.
Fanadinam-panjakana :: Harafitra tsy ho ela ireo laza adin’ny CEPE sy BEPC